Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa Discover ➡ Discover online ▷ ➡️
Apha ngezantsi kweli nqaku uza kufumana zonke iinkcukacha ezihambelanayo malunga Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa ukuze ngale ndlela ubulele uThixo ngaphambi kokuba ulale kwaye uphumle ngokufanelekileyo.
Yonke ingcaciso malunga nokumangalisa Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa
1 Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa
1.1 Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa
2 Okungakumbi ngoMthandazo wangokuhlwa wangoku
3 Iinkcukacha ezithe kratya
La Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa Iyaziwa ngokuba yenye yemithandazo ebaluleke kakhulu kubusuku ngabunye babo bonke abakholwayo ngexesha lokugqiba usuku lwabo benombulelo ngokupheleleyo kuThixo. Ingcinga yokuqala yosuku kufuneka ihlale ibulela uThixo kwaye ngendlela efanayo, ingcinga yokugqibela yosuku kufuneka ihlale izinikele kuThixo.
Ndiyabulela koku kubalulekile ukuba ungalahli ubuhle Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa INkosi yethu inokugcinwa ngayo maxa onke.
Kuya kufuneka kukhunjulwe ukuba zonke iingcinga ezenziwe mihla le kufuneka zibeke imbeko kuThixo wethu, yiyo loo nto sithathe umsebenzi wokuzisa Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa yeyakho
«Thixo wam, uYesu Krestu: Ndiyabulela ngazo zonke izibonelelo ozinike ngolu suku. Ndikunika iphupha lam kunye nawo onke amaxesha obu busuku kwaye ndicela ukuba undigcine kuwo ngaphandle kwesono.
Kungenxa yoko le nto ndizibeke ngaphakathi kwelona cala lakho lingcwele naphantsi kwengubo kamama, iNtombikazi enguMariya. Ndincede kwaye undigcine ngoxolo, iiNgelosi ezingcwele, kwaye neNtsikelelo yakho inokuza phezu kwam. »
Nje ukuba ukubonakaliswa kwenziwe, kunokwenzeka ukuthatha ixesha lokucingisisa ngomsebenzi ngamnye owenziweyo imini yonke kunye nendlela yokuphucula indlela ocinga ngayo kunye nokuziphatha kwakho kwabanye ukuze ube ngumntu olunge ngakumbi kusuku olulandelayo.
Okungakumbi ngoMthandazo wangokuhlwa wangoku
«Nkosi Kumkani wezulu nomhlaba, ndikunika umbulelo ongenasiphelo ngayo yonke into endiye ndadibana nayo ngalo mhla. Ndiyabulela kuwe kuba undivumele ukuba ndibhaqe uthando lwakho imini yonke kwizinto ezincinci.
Nkosi ndiyakudumisa kwaye ndiyakusikelela kuba ndiyakuthanda Ndiyabulela kuba uhlala uphuma uzokundikhawulela xa ndifuna uzuko kuwe ubawo wam uThixo kuba undikhathalele ngothando lwakho olungenamiqathango uligalela kakhulu entliziyweni yam Ndihlala ngoxolo umphefumlo wam uyakusikelela kwaye uyadumisa yonke imihla yobomi bam kuba ubuzalisa ubomi bam ngothando, uxolo nentsikelelo.
Ndixolele ukuba ndiyekile ukuthembela kwinceba yakho, ndiyakucela ukuba uze kum namhlanje ndizokuva ubukho bakho obundonwabisa nobundenza ndihlale ngoxolo.Ndiyabulela ngako konke okuhle okwenzayo ebomini bam kuba ndingowakho unyana kuba undiyalela njengotata ukuba afune iindlela zokufezekisa umbulelo wolonwabo kuba kukhanya ngaphezulu kobumnyama.
Ndiyazi ukuba akukho nto iyakundoyisa ngokuba kunye nawe, ungoyena mntu ndinabo, ke ngoku ndivula iingcango zobukho bam ukuze ndikhukuliswe bubukho bakho ndize ke ndikhuphe naluphi na usizi okanye uloyiko endaweni yoko Ndiyakwazi ukuwuzalisa ngalo lonke uthando lwakho olundomelezayo kwaye luyandikhuthaza ukuba ndiqhubele phambili undizalise ngobabalo lwakho noxolo onokwazi ukukunika lona kuphela.
Ndinombulelo kude kube ngunaphakade kuba uyinto yonke kum ngoba andithandabuzi ukuba ulapha ecaleni kwam, undikhathalele kwaye uyandithanda, kuyandithuthuzela ukuba nalo mzuzu wokusondelelana nawe kuba lixesha lethu. "
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa usenza umthandazo kubalulekile ukuthatha imizuzu embalwa ukuphefumla ngokunzulu kwaye ubulele, ubonakalise kwaye usebenze kwisimo ngasinye sengqondo esenziwe ngalo lonke usuku. Oku ke, iNkosi yethu ibisinika olunye usuku lokuphila olupheleleyo lwempilo.
Yinto eyaziwayo ukuba Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa Ngowona mzuzu ubuthathaka kunye noxabisekileyo ukukwazi ukuzifumana kunye nobukho beNkosi yethu; Kuyanceda ukukwazi ukunika umbulelo kunye nokufumana ukuzaliseka okuphunyezwe kuye kuphela kwaye ubulele usuku oludlulileyo lokukuvumela ukuba uphumle kwaye unike yonke into enobunzima ukuze unikwe inkampani elungileyo.
INkosi yethu iyakuthanda ngaphandle kwayo yonke into kwaye ayisokuze ikhalaze ngeempazamo ezenziweyo, ayisayi kubamba ingqumbo okanye igcwale inzondo.
«Nkosi, phakathi kobunzima, fumana ukuba akukho nto ilahlekileyo ukuba uyandixhasa kwaye undikhusele ukuba ndiphumelele, okokuqala kufuneka ulwe kwaye unyamezele uhlaselo olunikwa bubomi ekupheleni kolu suku ndikunika ukuphumla kwam kwakhona kwakhona. Ndinqwenela ukuvuselela amandla am.
Ndiyabulela ngayo yonke into ethi namhlanje indizalise ngamandla ukujongana nemeko nganye endiye ndadibana nayo ndiziva ndihlaziyekile ngaphakathi ndiyazi ukuba nabani na oza kuwe akaphoxeki, bandiphathise ukukhusela kunye nentsikelelo, enkosi ngokuba secaleni kwam ungandishiyi ngaphandle kwexesha kwaye ezingalweni zakho zothando intliziyo yam ilele ngobu busuku. Amen "
Wonke umntu othembela kwiNkosi yethu uyakuhlala eshiya uthando lwakhe ngaye lukhona. Ukusebenza ngokubambisana nemithandazo yokunikezela umzimba nomphefumlo kuThixo; i Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa Ayishiywanga ngaphandle, njengoko yaziwa ngokuba ngumthandazo umntu anokuwunyanga ngawo umphefumlo wakhe ngaphambi kokuba aphumle.
Njengoko besitshilo ngaphambilana, kubalulekile ukuthatha umzuzwana ukubonakalisa yonke imisebenzi eyenziwayo imini yonke; oku kube kanye Umthandazo wanamhlanje wangokuhlwa. Ukucamngca kubalulekile kuba ngale ndlela uyakusebenza ukuphucula usuku nosuku.
Ukuba ulithandile eli nqaku kwaye ufuna ukwazi imithandazo engakumbi yokubulela iNkosi yethu, siyakumema ukuba ufunde le enye malunga Umthandazo Isichotho.